Shabakadda Amiirnuur – Page 9
laba xildhibaan oo hore ayaa Maanta lagu dhaawacay qarax ka dhacay Degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho. Muxudiin Xasan Afrax iyo iyo Xuseen Caraale oo laabduba horay xilal Xildhibaanimo u soo xabtay ayaa la sheegay in isbitaal loola cararray kadib markii ay ku dhaawacmeen qarax gaari ay saarnaayeen lala beegsaday. waxaa […]
ugu yaraan hal Sarkaal oo Cadaan ah iyo afar ka tirsan Ciidamada Danab la yiraahdo ee Maraykanku tababaray una shaqeeyay ayaa ku dhintay qarax Saaka ka dhacay Deegaanka Tixsiile ee Gobalka Shabeelaha hoose. qaraxa waxaa barbar socday dagaal Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Ciidamadeedu la beegsadeen qolyaha la qarxiayay oo watay kolonyo […]
Qarax ayaa xalay lala beegsaday Wasiir ka tirsan Dowladda Federaalka ah kaasoo marayay deegaanka Ceel gaabta ee Magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa haleelay gaari uu saarnaa wasiirka Beeraha waxaase la sheegayaa in uu ka badbaaday. Xarakada Shababaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay Mas’uuliayda qaraxaan oo si weyn looga maqlay gudaha Magaalada Muqdisho. horay […]
Sarkaal Soomaali ah ayaa dhintay Dagaal shalay ka dhacay Duleedka Degmada Ceel waaq ee Gobalka Gedo, ka gadaal markii Xarakada Shababaul Mujaahidiinka ka hor tagtay Ciidamo Kenyaati ah iyo kuwa Soomaali ah loo la socday. Warka ayaa intaa ku daray in gaari Ciidamada isbaysanayay wateen waxyeelo la gaarsiiyay. Dhanka kale […]
Ugu yaraan laba askari oo Itoobiyaan ah ayaa ku dhintay Saldhig Ciidamada Itoobiya ku leeyihiin Magaalada Halgan ee Gobalka Hiiraan kadib markii Ciidamada Dagaal dhex maray. Qaarka mid ah Ciidaamda ayaa la sheegay in ay isku dayeen in ay kuwa kale hubka ka dhigaan taasuna waxay keentay in xabadu ka […]
Amar rasmi ah oo kasoo baxay madaxweynaha waqtigiisu sii dhammaanayo ee dalka Mareykanka ayaa lagu faray dhammaan ciidamada American-ka ah ee ku sugan Soomaaliya in ay isku diyaariyaan soo bixitaan. Wasaaradda difaaca ee loo yaqaan Pentagon ayaa gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha sheegtay in ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya oo gaaraya […]
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo weli wada qaybinta Sakada Xoolaha nool iyadoo la siinayo Fukhurada iyo dadka Masaakiinta ah ayaa iminka xoolo ka qaybisay Deegaano hor leh. Bulshada ku dhaqan Deegaanka Weeel maarow iyo kuwa kale oo toos taga degmada Afmadow ayaa ka faa’iideystay Xoolahaaan ay Xarakadu bixineysay kuwaasoo laga qaaday […]
SAWIRO DAGAAL IYO DIBAD BAX KA DHACAY BELEDWEYNE.
Ciidamo ka tirsan Dowladda federaalka ah iyo kuwo taageersan Janaraal geedooday oo la yiraahdo Xuud ayaa saaka dagaal ku dhex maray Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobalak Hiiraan. Labada dhinac ayaa isu adeegsaday Hub kala duwan iyadoo dhinac waliba isku dayayo in uu kan kale ka taag roonaado. Lama soo warin […]
Sarkaal Kenyaan ah oo lagu dilay NFD iyo dagaalo Gudaha Soomaaliya ka dhacay
Dagaal Shalay ka dhacay Deegaanka Amuume oo hoos taga Gobalka Gaarisa ee Dhuka Soomaalida ee Kenya gumeysato ayaa lagu dialy Sarkaalkii xukumayay Ciidamada hakaa ku sugan ee Kenya. Xog a warbaahintu hayshay ayaa xaqiijineysa in Sarkaalkaan oo Kenyaati ah goobta ku nafwaayay ku xigeenkiisiina dhaawacmay. Malateriga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa […]
Dhegeyso Wilaayada Jubbooyinka oo lacag Gudoonsiisay bukaano isbitaal ku jira
Waaliga Wiliyaada Jubooyinka Sheekh Muxamad Abuu Cabdalla iyo xubno kale ayaa dhawaan Booqashao ku tegay Isbitaalka Magaalada Saakoow ee Wilaayada. Sheekh Abuu Cabdallaa ayaa la kulmay Maamulka Isbitaalka iyo dhibanayaasha iyo Eheelkooda asigoo u kuur galay sida Caafimaadka dhibanayaashu yahay. wuxuu Bukaanada weydiiyay sida Xaaladoodu tahay sigoo Allaah uga rejeeyay […]
« Previous 1 … 7 8 9 10 11 … 278 Next »